Vaovao - kaopy sy tavoahangy plastika PET
Ahoana ny fanamboarana fitaovana PET?
Ny ampahany kely amin'ny menaka manerantany dia ampiasaina hanamboarana kaopy sy tavoahangy plastika PET.
4% ny menaka manerantany no ampiasaina amin'ny fanaovana plastika rehetra
Amin'ity fonosana ity dia 1.2% ny fonosana plastika fotsiny no ampiasaina hanamboarana kaopy sy tavoahangy plastika PET
Ny indostria, mifanaraka amin'ny adidiny amin'ny tontolo iainana, dia mijery hatrany ny fomba hampihenana bebe kokoa ny habetsaky ny rano ampiasainy amin'ny fizotry ny famokarana azy.
Ny PET CUP an'ny COPAK dia vita tamin'ny akora PET. Mazava tsara izy ireo ary afaka mampiseho mazava ny zava-pisotro misy anao. Hisarika ny mason'ny mpanjifa izany ary hampiroborobo ny voankazoo. Saingy ankehitriny dia nanjary manan-danja kokoa ny fiarovana ny tontolo iainana, noho izany dia namoaka kaopy PLA izahay. Ny kaopy PLA dia mora simba sy azo zezika. Saingy ambony lavitra ny vidiny ary tsy dia lehibe loatra ny fahafahan'ny famokarana. Izy io dia noho ny tsy fahampiana ara-materialy na dia any Shina rehetra aza. Na izany aza, raha mila kaopy PLA ianao dia afaka mitanisa ho anao koa, ny fotoana fandefasana fotsiny dia mety ho lava kokoa.
Ny mpanjifa sasany dia te hahafantatra ny fanamboarana kaopy PET amin'ny fasika PET. Ity dingana manaraka ity dia afaka mamaha ny afangaro anao.
Alohan'ny taona 2020, mpanjifa maro no mitsidika ny orinasa mpamokatra kapoaka PET sy ny orinasa mpamokatra tavoahangy PET. Ny milina famokarana mandeha ho azy sy ny atrikasa antsika madio dia mifanaraka amin'ny fanantenan'ny mpanjifanay rehetra. Mihaona amin'ny fenitry ny sakafo ny fizotry ny famokarana rehetra ary manana mari-pankasitrahana BRC, ISO, FDA, SGS izahay. Fantatsika rehetra fa tamin'ny taona 2020 dia nipoaka ny confid 19 ary foanana ny varotra iraisam-pirenena maro no nijanona. Tsy afaka mitsidika anay izao ny mpanjifa vahiny. Aza matahotra anefa, manana antoka ara-kalitao izahay. Tsy maintsy aseho ny horonan-tsary sy sary, handefa vokatra vaovao ho anao izahay amin'ny filaharany manaraka.
Any Sina, miverina amin'ny làlana mahazatra izao ny zava-drehetra. Ny fahaizantsika mamokatra ho an'ny kaopy PET sy tavoahangy PET dia nitovy tamin'ny taloha ihany. Ny fotoana fandefasana dia azo antoka. Tongasoa eto amin'ny COPAK.